Dowladda Mareykanka oo si weyn ah u Difaacday Wariye Harun Macruf - Awdinle Online
April 05, 2020 (Awdinle Online) – Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barta twitter-ka uga hadashay eedeynta ay hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA u jeedisay weriye Haaruun Macruuf oo ka tirsan laanta Af-Soomaaliga VOA ee ay leedahay dowladda Mareykanka.
Qoraal kooban oo ay safaaradda soo dhigtay twitter-ka ayaa lagu sheegay in “weerarada NISA ee ka dhanka ah Haaruun Macruuf” ay halis gelinayaan xoriyadda hadalka iyo madax-banaanida warbaahinta.
“Haaruun Macruuf waa weriye la ixtiraamo oo xirfadle ah oo ka howl-gala VOA, waana mid ka mid ah suxufiyiinta ugu saameynta badan Soomaalida. Weerarada NISA waxay halis gelinayaan xoriyadda hadalka iyo madax-banaanida warbaahinta ee aas-aaska u ah dimqoraadiyadda iyo isla xisaabtanka dowladeed ee Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraal ay safaaradda soo dhigtay barta twitter-ka.
U.S. Embassy Mogadishu, Somalia
@harunmaruf is a respected, professional @VOANews journalist & one of the most influential #Somali journalists. @HSNQ_NISA attacks threaten #pressfreedom & independent media as a foundation of democratic, accountable governance in #Somalia 442 people are talking about this Valueimpression Placeholder.
Hay’add Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa qoraal ay soo saartay 2-dii bishan April ku sheegtay inay “tallaabada ku habboon ee sharciga ah ka qaadeyso” weriye Haaruun Macruuf.
Qoraalkaas oo ay soo dhigtay barta twitter-ka ayey NISA ku sheegtay in Haaruun Macruuf uu “leeyahay xiriiro khatar ku ah amniga qaranka, kuna kacay falal ka baxsan anshaxa warbaahinta,” sida lagu sheegay qoraalka.
Qoraalka ayaan intaas ku daray “Waxaan hay’adaha dalka la wadaagaynaa iney ka feejignaadaan xiriirkiisa, soona wargaliyaan laamaha amniga qaranka.”
Idaacadda VOA ee uu ka shaqeeya Haaruun Macruuf ayaa hoos-tagta wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka, si la mid ah safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo iyana hoos-tagta wasaaradda.
Previous articleMusuq maasuq loo xiray Agaasime waaxed ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka DFS
Next articleFahad Yaasiin oo Waardiyiisa u Magacaabay Taliyaha Nabadsugida Gobalka Banaadir
Al-Shabaab oo weerar xoogan ku qaaday Saldhig Ciidan
Kenya oo soo saartay qorsho ka dhan ah Al-Shabaab